'आँसुको दहमा डुबिरहेको इतिहास र सडकमा छटपटाइ रहेको वर्तमान'
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्य एकीकरण गर्ने समयमा बेलायतमा भुमिगत रेलसेवाको बिकास भैँसकेको थियो। जतिबेला हामी अर्धजङ्गली थियौँ त्यतिबेला युरोप अमेरिकाले अभुतपुर्व बिकासको छलाङ मारिसकेका थिए।
विकसित देशहरूले चन्द्रमा यात्रा गरिसक्ता हामी सतिप्रथा कसरी अन्त गर्ने भन्ने समाज सुधारको चिन्तनमा थियौँ। तत्कालिन युवराज वीरेन्द्रले लन्डनको ख्यातिप्राप्त इटन कलेज पढ्दा उनले त्यहाँको आधुनिक बिकास र प्रगति पनि पढेका भए त्यहाँको सिकाइ र अनुभुतीले त्यो बेलाको नेपाललाई कसरी बिकास गर्न सकिन्थ्यो होला अहिले अनुमान लगाउन मात्रै सक्छौ हामी ।
राजा महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय जगत खासै देखेका थिएनन् तर महेन्द्रको समयमा जति नेपालको बिकास आजसम्म पनि भएको छैन। महेन्द्रकै जति बुद्धि महेन्द्रका छोराहरूमा यदि भएको भए नेपालको समृद्धि एशियाली मापदण्डमा पुग्थ्यो। वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र घोषणा बाहेक अरु गणना गर्न लाएकको खासै काम गर्न सकेनन् ।
महेन्द्रका छोरा नातीहरु रक्सी र तरुनीमा रमाए। फलस्वरूप राजसस्थाको पतन भयो। राजाको कार्यकालमा एउटा बोलिले ठुलो महत्व राख्थ्यो। राजाको सवारी हुँदा सवारी हुन लागेको स्थानमा रातारात बिकास हुन्थ्यो। त्यतिबेला जनताको सुख र चाहमा बिकास हुने भन्दा पनि राजाहरुको सुबिधाका लागि हुन्थ्यो।त्यो पनि ठिक थियो कमसेकम बिकास त हुन्थ्यो । अहिले त पार्टी झगडामा भएको बिकास पनि भत्काउने काम हुन्छ र सबैलाई आआफ्नो पक्षमा उभिनु छ। राजा देशको पक्षमा उभिन्थे भने अहिले नेता पार्टीका पक्षमा उभिन्छन ।
राजा वीरेन्द्र नारायणहिटी दरबार बाट नागर्जुन दरबारतर्फ सिकार खेल्न जान लाग्दा बालाजु बाइसधारा आसपास बाइपास नजिक एउटा जनताको गाडीले उनको सवारीलाई अवरोध पुर्याएको कारण बाइपास देखि सिधै चक्रपथ सम्म जोडिने अर्को लिन्क रोड रातारात तयार भएको थियो । त्यो बाटो राजाको सवारीका लागि भनेर तयार भयो। तर पछि जनताले पनि उपयोग गरे। राजाहरूको मुखमानै कानुन थियो। त्यतिबेला गर्न चाहेको भए नेपाल बिकास र सम्पन्नताको दृस्ठिकोणले धेरै भन्दा धेरै अगाडि बढ्न सक्थ्यो।
हुकुम नै कानुन भएको बेलामा महाराजहरु सुरा र सुन्दरीमै मोहित भएर बसे उनीहरूले भविस्य देखेनन। हो राजा महेन्द्रले पचास बर्ष अगाडिको बिकास देखे र नेपाललाई बिकासको आधुनिकतामा पुर्याए। नेपालका राजाहरूमा पृथ्वीनारायण र महेन्द्र मात्रै नेपालको राष्ट्र बिभुती बन्न लाएक छन अरु सबै गन्तिमा मात्रै परेका हुन्। आज केपी ओलीले रेलको सपना देख्दा हिजो राजा महेन्द्रले त्यसलाई बिपनामा परिणत गरिसकेका थिए।
बिरगन्ज, रक्सौल, अमलेखगञ्ज, जयनगर, जनकपुर आदि भुमिमा रेलका लिकहरुको कन्काल मात्रै छ अहिले । इतिहास बनाउन तर्फ होइन इतिहास मेट्न तर्फ लाग्यौ हामी फलस्वरूप बिक्रि गरेर खाइए धेरै उद्योग कारखाना । त्यो बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिस्तार र कुटनितिक रणनिती अहिलेको जस्तो कम्जोर थिएन। अहिले हामी इतिहास त कलन्कित
थियौ भन्छौं र आफू चाहिँ काम गर्न छोडेर सडक नाटक मंचन गरिरहे छौ खोइ कस्तो समृद्धि ल्याउन खोजेको हामीले?
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल हिन्दुराज्य र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा ख्यातिप्राप्त थियो पुजित थियो बिश्व आखामा। हामी भन्दा गरिब भोका सार्क राष्ट्रका देशहरूले अहिले अभुत्पुर्व बिकास गरे । हामी अझैसम्म गरिबीको रेखा मुनि छौ। भुटान आज जि.डि.पि मा कहाँ पुगिसक्यो हामी जस्ताको तस्तै छौ। राजनीतिले देश सपार्ने होइन बिगार्न तर्फ उद्दत भयौ हामी । यो नै सबैभन्दा दु:खद र दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो ।
नेपाल बिकासमा पछाडी पर्नुको मुख्य कारण पदमा पुगेका ब्यक्तिमा शक्तिको दम्भ, पदीय लोलुपता र उन्माद अनि षड्यन्त्र हो। भिमसेन थापा देखि केपी ओली सम्मको युगलाई अध्ययन गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहास केवल षड्यन्त्र र शक्ति दुरुपयोगले भरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई सांसद विघटन गर्ने पुर्ण अधिकार छ कि छैन ? र कस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार संविधानले प्रदान गर्छ यस्को बारेमा स्पष्ट ब्याख्या संविधानले कुनै पनि धारामा भन्न सकेको छैन। संविधानले त अन्कगणित जस्तो सूत्रबद्ध र एउटा मात्रै ब्याख्या बोल्नुपर्ने होइन र? तर नेपालको संविधानमा घुमाउरो पारामा ब्यक्त गरिएको छ प्रधानमन्त्रीको अधिकारको बारेमा र विघटनका बारेमा ।
संविधानले बिघटनका बारेमा स्पष्ट नभनेपछी सबैले आआफ्नै पारामा तर्क र ब्याख्या गर्न थाले। पार्टीका नेताले,कार्यकर्ताले, बुद्धिजीवीले न्यायिक क्षेत्रका मान्छेले नागरिक समाजले ब्यक्तिले ब्यक्त गरिरहेका भावनाहरु तर्क सङ्गत पनि छन तर्क सङ्गत पनि छैनन् । अहिले बिकासका मुद्दाहरु ब्यापक थाती परिरहेको छ भने राजनीतिक मुद्दाले देश तताएको छ। दिनहुँ सडकमा बेरोजगार मान्छे गाइजात्रा देखाइ रहेका छन।
एउटै पार्टी भित्रका एकै उदेश्य राखेका नेता कार्यकर्ताका एक आपसका गाली गलौज सुनिनसक्नु छ। पदको स्वार्थ , ब्यक्तिगत इगो, शक्तिको दुरुपयोग , बिदेशी इशाराको गुलामी , र अहंकारको बिस्फोट भन्दा अरु केही तुक छैन दुवै पक्षको सडक नाटकमा।
यो नौटंकी भन्दा अरु केही होइन। हामी कामै छोडेर पशु बनेर सडकमा दिनहुँ भौतारिरहेका छौँ यो केका लागि ? कस्का लागि र किन ? । केपि ओलि पक्ष र प्रचण्ड माधव पक्षको धुन्दुली बजिरहेको छ। सडक घन्टाै जाम हुन्छ। गरेर खानेहरु समेत अलमलिएको अवस्था छ। सडक बन्दले गर्दा ठेला गाडा चलाउने देखि श्रम बेचेर खानेहरुका पसल बन्द छन। नेतालाई कुकुरको गाली दिनेहरू अब थाकिसके। नेपाली जनतामा चेतना आएको रेछ भन्नेहरु एकातिर छन। तर म भन्छु यो चेतना होइन यो त पागल पन हो।
हिजो परिवर्तनका लागि जनगीत गाउनेहरु आज सत्ताको भजन गाइरहेछन। हिजो निर्दललाइ निर्दयीहरुको शासन सत्ता भनेर रगत छाद्ने गरि भाषण गर्नेहरू आज गणतन्त्रमा भुडी पड्किने गरि अघाइरहेछन । हिजोको बिरोध त आज धनी हुन पो रहेछ।
हिजोको असन्तुष्टि त आज करोडको गाडी चढ्न र आफन्तलाई जागीर र ठेक्का दिन पो रैछ। हिजोको रुवावासी त आज यिनै भोट दिने जनतालाई धेरै कर लगाउन पो रैछ। हिजो त कमसेकम ठेलागाडा धकेलेर परिवार पाल्ने हर्कजितहरु आनन्दले त निदाउथे । आज फेरि तिनैलाइ छ परिवारको चिन्ता छ । तिनैलाइ छ देशको पनि चिन्ता । यहाँ पेटभर भात खान नपाउनेलाई छ देशको चिन्ता । भुडी पड्काउने त रास्ट्रवादको अभिनय मात्रै गर्छन। परिवर्तन कस्को लागि हो? हिजो नाङले पसल थाप्ने फुलमाता तामाङले बच्चालाई भरपेट खुवाएर सरकारी स्कुलमा त पढाउथिन आज तिनै फुलमायालाले थापेको नाङले पसलहरु पनि सक्तिका लागि सडक बन्द गर्नेले ओगटेको अवस्था छ। मानिसहरू किन सडकमा नौटन्कि देखाइ रहेछन काम गर्न छोडेर ।
अरबौ कमाउनेले राज्यलाई कर तिरेका छैनन् । न्यायाधीश तिनै कर छल्नेलाइ कर नतिर भन्छ उस्कै पक्षमा मुद्दा फैसला गर्छ। कर छल्ने काला ब्यापारीको पक्षमा मुद्दा फैसला हुँदा सरकार मौन बसिदिन्छ। झन यो देशमा कर छल्ने कर्तुतहरुको मनोबल उच्च रहन्छ । नक्कली भ्याटबिल बनाएर राज्य छल्नेहरुले दोहोर सुबिधा लिइरहेका छन। को दुखी ? को गरिब? को अपराधी ? को काला ब्यापारी यहाँ कुनै मतलब छैन। जस्ले पार्टीलाई अकुत पैसा बुझायो उस्ले फेरि तिनै निर्दोष जनता मार्ने हुन। अन्तत ठगिने र मारिने निर्दोष जनता मात्रै हुन्।
हरेक दिन शेयरमूल्य बढेकोमा मलाई केही प्रभाव पार्दैन किनकि मसग सेयर छैन । सिधै भन्नुपर्दा मसग सेयर किन्ने पैसा छैन । सर्वहाराहरु सर्वोच्च पदमा पुग्नैका लागि यदि राजनीति गर्छन् भने ती सर्वहारा होइनन् ती कर्महारा हुन धर्महारा हुन। तिन्ले कहिले जनताको गीत गाएनन र गाउदैनन पनि । मलाई सेयरमूल्यमा गिरावट आउँदा दुख पनि लाग्दैन र मुल्य बढ्दा खुसी पनि लाग्दैन। सेयर कारोबार कस्ता मनुष्यले गर्छन् भनेर मलाई राम्रोसग थाहा छ । शेयरमूल्य भनेको आधुनिक भौतिकवादी शहरीया नव धनाड्यहरुले कमाएको धनलाइ बैधानिक बनाउने खेल मात्रै हो ।
अफिसको काम छोडेर पल पल मोबाइलमा सेयरको भाउ हेरेर बस्ने कर्मचारी देख्दा धिक्कार्न मन लाग्छ मलाई। त्यस्ता लठैतहरु जागीर छोडेर किन पुरै सेयर कारोबारमा लाग्दैनन ?। तिनको सेयर घट्दा यता अफिसमा पो साइसाइसुइसुइ। रुवावासी छ कहिले । कहिले उफ्राइ छ बुर्लुक्क बुर्लुक्क। भाउ बढेको दिन अफिस नै खाली पारेर चिया खाने लैजाने कर्मचारीलाइ । भाउ घट्यो भने दुई चार दिन अफिस नै नआउने।अहिले हरेक सरकारी र सस्थानका कार्यलयमा यो प्रवृत्ति हाबी भएको छ । अफिसको नुन देखि घुन सम्म घुस देखि भुस सम्म चपाउने तर नुनको इज्जत कहिले नगर्ने तिनै बज्रस्वाठहरुले बिगार्छन इमानदारीताको माहोल कार्यालयमा ।
घरबाट सिँगान पुछ्न नसकेर छोराले फोन गर्दा अर्थमन्त्रालय बाट फोन आयो भनेर हाकिमलाई तर्साउदै अफिसबाट भाग्ने प्रवृत्ति आजसम्म पनि उस्तै छ । गणतन्त्र त्यस्तै मान्छेलाई आको छ । निर्दलमा यिनै हा टा गरेर खान्थे आज गणतन्त्रमा पनि यिनैले हा टा गरेर खाइरहेका छन। आज यस्तै मनुवाहरु हरेक अफिसका भाइरस हुन। त्यस्ता भाइरसहरु नेपाललाई समृद्धि तिर उक्लनु नदिने रोग हुन। ती आफू चै सप्पन्न छन तर रास्ट्रलाई चै गरीब बनाउछन खोक्रो बनाउछन। तिनले कहिले बुझेनन् कि नेपाल धनी भयो भने म पनि धनी हुन्छु भन्ने कुरा । फेरि तिनै लम्पटहरु रास्ट्रवादका कुरा गर्छन् । आफू केही नगर्ने । अरुले गरेको काममा बितृस्णा जनाउने। आफ्नो आङमा भैंसी नदेख्ने आर्काको चै धोतीको जुम्रा केलाउने यिनै सिल्ली शिल्पटहरुको आधिपत्य छ हाम्रोमा अझैसम्म । अनि यो परिवेशमा मुलुकको समृद्धिको कुरा गर्नु केवल कल्पना मात्रै हुने रहेछ।
एकातिर जागीरेको पगरी त्यो माथी पनि अफिसर अर्कोतिर भ्रष्टाचार गरेर कमाएको धन शेयरमा लगानी । कार्यलय आयो । हाजिर गर्यो । एक दुई साथीलाई च्याप्यो। तिनीहरूलाई चिया खाजा ख्वायो। आफ्नो बनायो। एक दुई छाक खाजा खाएसी ती खन्चुवाहरु पनि उसैको वरिपरि रिंगन थाल्छन् । सरकारमा भएका एक दुई जना मन्त्री र समानुपातिकमा , आरक्षणमा त मेरा आफन्त हुन नि भन्ने भ्रम फैलायो। तिनै आरक्षणमा परेका माननीय साम्सदको नाम भजेर बेचेर कार्यलयका सोझा कर्मचारीलाई प्रयोग गर्यो । नेपालमा लोकतन्त्र आउनु पहिले पनि फटाहाहरुको हालीमुहाली थियो र अहिले पनि तिनै फत्तुर फटाहाहरुकै हालीमुहाली छ । परिवर्तन चाहनेले परिवर्तनको कहिले महसुस गर्न सकेका छैनन् यो देशमा ।जो अघाएका छन खानेकुरा तिनैको अगाडि गएर थुप्रीन्छ यो कस्तो बिडम्बना ।
परिवर्तन तिनैलाइ मात्रै आएको छ जो यो देशमा परिवर्तन कहिल्यै चाहदैनथे ! रोल्पेलीको आगनमा खुसी छाडिएका छैनन् ।जुम्लेलीको आखामा उस्तै छ भोकको आँसु र निराशाको शोक गीत उहि पाराले बजिरहेको छ । पाचथर हाङपाङ हायुको ब्यथा उस्तै छ । ऋण गरेरमात्र चाड मनाउन पाउछन तिन्ले। कोहि नेपाली भोकले र रोगले मर्दैनन भनेर भन्ने नारामा त ठिकै होला तर ब्यवस्थापन र ब्यवहार त्यस्तो छैन।
केही कमाउन लाहुरे नै हुनुपर्ने । दरवानी नै हुनुपर्ने अवस्था आज पनि उस्तै छ । हिजो पन्चायतकालमा ईन्डियन आर्मीमा भर्ती हुन भनेर नेपाली युवाहरूलाई गल्लुवालले चक्रपथमा रगत छादुन्जेल उफ्राएको दौडाएको यहि आखाले देखेको हो र आज पनि त्यही दृश्य देखिरहन्छु । हिजो बृटिस आर्मीमा भर्ती हुन तछाडमछाड थियो आज त झन लाहुरेको महत्व बढेर गएको छ । हाम्रो देशमा परिवर्तन आएको भए किन लाहुरेहरुको इज्जत यति धेरै दिनदिनै बढेर जान्थ्यो होला र ?
लाहुरेमा भर्ती हुने प्रथा कायम नै छ। फरक त्यति हो कि पहिला गाउँलेको परियार दाइले काधमा कल बोकेर आफुले कमाएका बिष्टहरुको घर घरमा गएर लुगा सिउथे आज आफ्नै घरमा टेलर खोलेका छन । हिजो लुगा सिउने आज पनि त्यही लुगा सिउदै छन। पेशा परिवर्तन भएको छैन मात्रै काम गर्ने शैली र ढंग परिवर्तन भएको छ। साना ब्यावशाय गर्नेको बरु बिचार परिवर्तन भए तर ठुलो नेता भन्नेहरूको दिमाग पुरातन ढंगमै चलिरहेको छ आजसम्म पनि । लोकतन्त्रको दियो सधैं बलिरहोस। लोकतान्त्रिक शासन ब्यावस्थाको अरु कुनै दोस्रो विकल्प छैन र नहोस् पनि । हामीले चाहेको हामीले रोजेको शासन पद्धति यहि हो । तर जनता खुसी रहे मात्रै हो कुनै पनि शासन ब्यावस्थाले स्थायित्व पाउने। जनताको खुसीमा नै निर्भर छ सरकारको आयु र शासन ब्यवस्थाको भविस्य । जनताका लागि सरकार नै अभिवावक हो ।
सरकार नै दुख बिसाउने स्थान हो । सरकार सगै हो जनताले असन्तुष्टि पोख्ने पनि तर असन्तुष्टि पोख्यो भनेर उसलाई थुन्ने धम्क्याउने हतकडि लगाउने हिंड्न् डुल्न र उस्को आवाज समेतलाइ बन्देज लगाउने काम लोकतान्त्रिक सरकारले गरेको सुहाउँदैन । हिजो लोकतान्त्रिक पक्षधरलाई मारेको थियो निर्दयी पन्चायत शासन ब्यावस्थाले फेरि त्यही सिको आजको सरकारले पनि गरिरहे छ। राजा हुन मनलागेर हो अठार हजार नेपाली मारेर सत्तामा पुगेको कम्न्युस्ट सरकार ? यदि हो भने लोकतन्त्रको लागि लडाइँ लडेर रास्ट्रका लागि साहादात प्राप्त गर्नेहरूका अमर आत्माले अवस्य सराप्ने छ ।
सबैसँग सबैको बिचार मिल्दैन ।मिल्नु पर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। बिचार आआफ्नै हुन्छन। सोच भिन्न हुनुपर्छ । भिन्न सोच र चिन्तनको उपज नै हो आजको विकसित एक्काइसौं सताब्दीको सघन यो रुप । एकै सोचको एेजेरुमा फुल्ने फूलहरु राम्ररी फक्रदैनन । सोच जस्ले जस्तो राखेपनी देशको समृद्धिका लागि सबै नेपाली एक हुनुको विकल्प छैन अब। लोकतान्त्रिक बिचारधारा भन्दा अर्को धारणा राख्नेलाइ पनि सम्मान दिन सक्नु वा सम्मान गर्नु त्यो चै सबैभन्दा विकसित लोकतन्त्रको रुप हो ।
एउटा कुरा हामीले हेक्का राख्नु जरुरी छ कि सबै समान कोहि कहिले हुन्नन। कुनै पनि युगमा अपार समानताको परिब्याख्या हुन सकेको छैन । पाँच हजार बर्ष अगाडि धर्मको नास भयो भनेर अवतार लिने श्रीकृष्ण युगमा पनि सबै प्राणिमा समभाव थिएन। कृष्णले समानताको राज्य सस्थापन गर्नकै लागि महाभारत युद्द रचना गरे । हिजो राम राज्यमा पनि समानताको कुरा छेउ लागेकै हो । लोक के चाहन्छ भन्ने कुरालाइ गौण मानियो र शासकहरु आफ्नो इच्छा अनुसार चल्न थाले भने तिनले आफ्नो इतिहास बिगार्छन ।
तिनै राम हुन जस्ले आफ्नो भक्त सबरीको जुठो बयर पनि खाए अनि तिनै राम हुन आफ्नै सीताको सतित्वमा सन्खा लागेर श्रीमतीलाइ आगोमा होमिन पनि बाध्य बनाए । यो लोकको लाज राखिदिनाका लागि थियो। त्यसैले हामीले इतिहास देखिनै भन्दै आयौ कि लोक सम्मतिको आधार नै प्रजातन्त्रको मुटु हो । संविधान मात्रै त केवल कोरा दस्ताबेज हो जतिबेला जनता दुखी हुन्छन् । जनता सुखी र खुशी हुने संविधानका अनेक धारा र उपधाराले होइन। जनता खुसी हुने आधार त सरकारले प्रत्याभूत गरेको जनप्रीय कामले हो।जवसम्म सरकारले जनप्रीय काम गरिरहन्छ तवसम्म लोकतान्त्रीकरणको नुतन धाराहरु अवलम्बन भैरहन्छ। समाजमा सम्मानित भएर बाच्न चाहन्छ हरेक मान्छे । त्यो सम्मान शहरमा शेयरमूल्य बढेर होइन जुम्लेलिले हुम्लेलीले भरपेट भात खान पाउदामा मिल्छ सरकारलाई पनि । अर्थमन्त्रीले शेयरमूल्य बढाेस भनेर भन्दा हुम्लाको गरिब टोपीको घेरा फाटेको हुम्लेलीलाइ के फाइदा छ र ? शहरमा मात्र सम्पन्नताको दियो बालेर लोकतन्त्रको स्थायित्व सम्भावना छैन।
भुमिहिन कृषकसम्म राज्यको आँखा पुगेको खण्डमा लोकतन्त्रको दियो सदाझैँ बलिरहने छ । शेयर दलालको पुँजि वृद्धि र पुजि डुबानको चिन्तामा होइन गरीब गाउँलेका घर जहान र परिवारको चिन्तामा जब राज्य पनि सँगै चिन्तत हुन्छ अनि सतिले सरापेको यो देशमा पनि सत्य युग आउँछ कि !